Nihaona tamin'ny kanto an-dalambe tany Bruxelles i Bruegel
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Nihaona tamin'ny kanto an-dalambe tany Bruxelles i Bruegel
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
visit.brussels, miaraka amin'ny Brussels miaraka amin'ny Farm Prod ary miaraka amin'ny fanohanan'ny City of Brussels, dia namolavola fitsangatsanganana "PARCOURS Street Art" manome voninahitra ny tompo Flemish lehibe Pieter Bruegel ao afovoan'ny renivohitra. Fresko tsy latsaky ny 14 izao no mandravaka endrika maro amin'ny distrikan'i Marolles.
Brussels sy Bruegel dia mifamatotra tsy azo ihodivirana. Nandany ny androm-piainany tany Bruxelles ilay mpanakanto ary nalevina tao koa izy. Loharanom-panentanam-panahy ho azy i Bruxelles: teo no nandokoany ny roa ampahatelon'ny sangan'asany. Ireo mpomba azy matanjaka dia nonina an-tongotra minitra vitsy miala ny tranony, tao amin'ny Mont des Arts. Androany dia mitahiry fanangonana zava-dehibe ny sanganasan'i Bruegel izy; taorinan'ny tranombakoka Kunsthistorisches any Vienna, ny Royal Museums of Fine Arts any Belzika dia manana ny fanangonana sary hosodoko be indrindra an'i Bruegel, ary ny Tranombokim-panjakana dia mitazona sokitra latsaka ny 90.
Nahatsapa adidy i Bruxelles hanao hetsika maromaro hanamarihana ny faha-450 taonan'ny fahafatesan'ity mpanakanto malaza eran-tany ity. visit.brussels, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Farm Prod, miaraka amin'ny fanohanan'i Delphine Houba, Alderwoman of Culture, fizahan-tany ary hetsika lehibe ao an-tanànan'i Bruxelles, dia nanome voninahitra an'i Pieter Bruegel ihany koa, tamin'ny alàlan'ny famolavolana diabe an-dalambe amin'ny alàlan'ny afovoan-tanàna.
Manomboka androany dia afaka mankafy fresko 14 tsy latsaky ny XNUMX ny mpitsidika mandritra ny dia, noforonin'ireo mpanakanto izay mpikambana ao amin'ny vondron'olona, ​​ary koa mpanakanto fanta-daza fanta-daza. Ny fotoana mety indrindra hahitana an'i Bruegel, amin'ny fotoana hafa.
Ireto fresco 14 ireto dia ho ampahany lehibe amin'ny fitsangatsanganana PARCOURS Street Art, izay novolavolain'ny City of Brussels hatramin'ny 2013. “Sambatra tokoa isika afaka mampiditra freska aingam-panahy avy amin'ny sanganasan'i Bruegel tamin'ny fitsangatsanganana PARCOURS Street Art, izay misy sanganasa 150 eo ho eo,” hoy i Delphine Houba, Alderman of Culture, fizahan-tany ary hetsika lehibe ao an-tanànan'i Bruxelles. “Faly eraky ny tanànan'i Bruxelles handray ity fitsidihana ity any amin'ny distrikan'i Marolles, izay ivon-toeran'ny ivon-kolontsaina mitondra ny anaran'ny artista! Houba.
Ny aingam-panahy: "Ny dihy mariazy eny ivelany" (sary hosodoko)
Mpanakanto: Lazoo (FR) Toerana: Rue Haute n ° 399, 1000 Bruxelles
“Rehefa nandalo ny sanganasan'i Bruegel the Elder aho dia tena liana tamin'ny fanehoana ny nofinofy sy ny seho mampiseho ny fiainam-pianaran'ny mpiasa, indrindra ny fankalazana. Ny sangan'asako koa dia mifantoka amin'ny lohahevitra fankalazana sy fandihizana, koa io sanganasan'i Bruegel io dia safidy natoraly ho ahy satria ahafahako mamorona fifamatorana eo amin'ny tontolon'i Bruegel, sy ny ahy. Ny "dihy mariazy eny ivelany" dia nampiseho tamiko fa, na dia manana elanelam-potoana 450 taona aza, ity sary hosodoko ity dia mifanentana amin'izao rehetra izao izay faritako amin'ny sary hosodoko manokana. Izany no antony nisafidianako ny hamerenako ity sary hosodoko ity, mba hahafahako maneho ity lafiny ity izay entanin'ny fanahy Bruegel ato amiko, sady kilasin'ny mpiasa no maoderina tanteraka. Noho izany, afaka mahita ny endri-tsoratra mitovy amin'ny "dihy mariazy eny an-kalamanjana ianao", fa amin'ity indray mitoraka ity amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Ity fresco ity, izay hosodoko akrilika sy aerosol, dia mampiasa loko mitovy amin'ny nampiasan'i Bruegel, saingy amin'ny fomba hafa. Ny sary hosodoko dia feno kolontsaina hip-hop. Tonga amin'ny rindrina ny loko mba hampisehoana ny herin'ny sehatra, ka toy ny sivana miloko mangarahara no fiasa. Maoderina tanteraka ny fomba fiasan'ny loko, nefa tsy misy fiatraikany amin'ny drafitry ny tarehin-tsoratra. Noho izany, ny hosodoko Bruegel dia miharihary sy hita mazava, kanefa ny fahitana ankapobeny ny loko dia manampy ny fahitana lavitra ny asa manontolo. Amin'ity fresco ity dia te-hanambara ny zavatra aingam-panahy ao amin'ny sanganasan'i Bruegel ao amiko aho: sehatra iray avy amin'ny fiainana an-dakilasy miasa, mahazendana amin'ny fihavaozana sy ny moderina. "
Ny aingam-panahy: "Ireo mpihaza amin'ny lanezy" (Hoso-doko)
Mpanakanto: Guillaume Desmarets - Farm Prod (BE) Toerana: Rue de la Rasière n ° 32, 1000 Bruxelles
“Nanaitra ahy avy hatrany ny rivotra sy ny endrik'ity sehatra ity. Na dia mampiseho seho iray amin'ny fiainana tsotra aza izy io, dia misy atmosfera tsy ampoizina mipoitra. Nanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny mpihaza sy ny alikany aho. Amin'ny alàlan'ny fitazonana ireo endri-javatra firafitra, nanova tanteraka ny lohahevitra sy ny estetika sary aho. Mampiseho ireo mpihaza voalavo enjehin'ny rembiny izao ilay sehatra, ary ao anaty tontolo manjombona sy manonofinofy izany rehetra izany. Karazana fanoharana tsy azo antoka momba ny hadalana. ”
Ny aingam-panahy: “ny fanoharana momba ny mpiandry ondry tsara” (sokitra)
Mpanakanto: Farm Prod (BE) Toerana: Rue des Renards 38-40, 1000 Bruxelles
“Nanapa-kevitra izahay ny hiasa amin'ny antsipiriany manokana momba ny sokitra, ka hitondra ilay mpiandry ondry miaraka amina ondry ao an-damosiny. Ny tanjona dia ny hamindra ny fijerin'ny mpiandry ondry amin'ny amboahaolo ao an-damosiny. Ny toetra afovoany amin'ity fresco ity dia manondro ny Rue des Renards (Foxes Street), misy ilay fresco. Io ihany koa dia fiantsoana ny atmosfera eo amin'ny manodidina, izay feno bar sy olona tia fety. Miambina anao ny mpiandry. Raha ny momba ny sary dia nafangaronay ireo fomba teo anelanelan'ny fanaovana réalitéista, ny fahitana Bruegelian ary ny antony ankehitriny. Fomba iray hafa ampitana ny lafiny cosmopolitan'ny manodidina. "
Ny aingam-panahy: "Ny Tilikambon'i Babela" (Hoso-doko)
Mpanakanto: Kim Demane - Otan'ny Delicious (SE) Toerana: CC Bruegel - Rue des Renards n ° 1F, 1000 Bruxelles
Ho an'ny ati-doha mahafinaritra, dia tandindon'ny famoretana i Babylona. Fahitana demoniaka momba ny lehilahy maniry fahefana ary te-hametraka ny lalany amin'ireo olona avy eo an-tampon'ny Tilikambony. Io no fototry ny fiarahamonintsika. Na dia namorona ity sangan'asa ity aza i Bruegel taonjato maro lasa izay, dia mbola misy ifandraisany ihany ankehitriny.
Ny fitaomam-panahy: "Peter Bruegel the Elder" (sokitra)
Mpanakanto: Arno 2bal - Farm Prod (BE) Toerana: Rue du Chevreuil n ° 14-16, 1000 Bruxelles
“Raha jerena ny fametrahana ity rindrina ity, eo afovoany avo sy azo jerena lavidavitra, dia mila mitady sary mety hisy fiatraikany avy lavitra aho, ary lasa mazava nefa manjavozavo rehefa manatona azy ianao. Rehefa mirona amin'ny be loatra amin'ny fizotran-javatra famoronana aho dia te-hanalavitra ny tenako amin'ireo firaketana sarotra matetika nataon'i Bruegel.
Nanjary nazava tamiko avy eo ny solontenan'i Pieter Bruegel.
Ity sary ofisialin'ny mpanakanto ofisialy ity dia sary malaza izay fantatry ny olona raha vao jerena. Noho ny fizotry ny fanaovana sokitra dia mihoatra ny fotoana io ary nadika imbetsaka. Amin'ny maha artisan 2.0 ahy, araka ny tiako iantsoana ny tenako dia te handika indray ity sary ity amin'ny fomba maoderina misy ahy aho, amin'ny alàlan'ny tsipika mazava, milalao amina endrika misintona sy andinin-tsoratra masina.
Ny fototry ny sanganasa tany am-boalohany dia namboarina tamin'ny tsipika marindrano ary, fantatro fa mpisolo vava ny fomba fiteny sy lalao teny ("The Flemish Proverbs") i Bruegel, dia te-hamorona ABC aho, mampiasa indray ny teny sy ny teny eo an-toerana avy any Marolles sy Bruxelles . Taorian'ny nanaovako fikarohana dia nisafidy teny manodidina ny 100 aho avy amin'ny fitenim-paritra “Zwanze” nolazain'i Marolliens taloha, sy ny fomba fiteny maoderina izay avy amin'ny fahasamihafana ara-kolontsain'ny mpiara-monina. "
Ny fitaomam-panahy: "Flight to Egypt" (sary hosodoko)
Mpanakanto: Piotr Szlachta - Farm Prod (PL) Toerana: Zoron'ny rue des Capucins sy la rue des Tanneurs
"Ilay mpanondrana an-tsokosoko": Ilay sary hosodoko dia maneho mpivady iray izay manandrana mamakivaky ny sisin-tany mankany amin'ny eritreritra eropeana iray manintona sy manintona. Mpanondrana olona an-tsokosoko no miandry kely kokoa haka azy ireo. Any amin'ny iray amin'ireo faritry ny cosmopolitan indrindra ao Bruxelles, ity asa kanto ity dia mankalaza ny fihetsiky ny olona izay efa nisy hatrizay hatrizay.
Ny aingam-panahy: "Ny boriky any am-pianarana"
Mpanakanto: Alexis Corrand - Farm Prod (FR) Toerana: Rue Blaes 135
“Nisafidy ny hanamboatra ny Ass indray aho any am-pianarana. Ity asa ity dia mampiseho mpampianatra iray voahodidin'ny kilasy izay tsy voafehy intsony. Tiako izany noho ny vazivazy. Tamin'ny voalohany dia te-hanamboatra ny lohahevitra momba ny savorovoro ataon'ny ankizy aho. Taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny endrika craziest sy emblematika indrindra amin'ny asa aho, dia ny boriky izay azo jerena eo am-baravarankely. Ity fanapaha-kevitra ity dia ny haben'ny rindrina sy ny toerana misy azy no nahatonga izany. Nihevitra aho fa mendrika zavatra mafy sy hita mazava tsara fa tsy be entana. Tsy nampidiriko koa ny sasany amin'ireo fiasa amin'ilay tany am-boalohany izay noheveriko fa mampametra-panontaniana, toa ny mpampianatra mamono zaza. Tamin'izany no nahafahako nifantoka tamin'ny endri-javatra lehibe tamin'ny fiheverana tsara ny antsipiriany. Mba hanamafisana sy handrafetana ny asako dia napetrako tamin'ny karazana fomba fijery diso ny boriky, nanahaka ny sisin'ny rindrina teo amin'ny rindrina aoriana mba hanomezana ny fiheverana fa hivoaka avy amin'ny rindrina ny boriky. "
Ny aingam-panahy: "Sloth" (sokitra)
Mpanakanto: Nelson Dos Reis - Farm Prod (BE) Toerana: Rue Saint Ghislain 75
“Matetika aho no nanao sary sy nandoko ireo mpilalao sarimihetsika mahafinaritra izay somary misy kilema, karazana anti-mahery fo. Te hanome voninahitra ny mpanakanto amin'ny fombako manokana aho amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny iray amin'ireo zavaboary maro
ary esorina ivelan'ny sahan'andininy mba hahatonga azy io ho mpandray anjara lehibe amin'ny hosodoko. "
Ny aingam-panahy: "The Peasant and the Nest Robber" (sary hosodoko) sy "Pride" ary zavaboary hafa avy amin'ny sokitra samihafa (sokitra)
Mpanakanto: Les Crayons (BE) Toerana: Rue du miroir n ° 3-7, 1000 Bruxelles
"Ny hevitra dia ny fananana tarehin-tsoratra iraisana eo alohan'izay, avy amin'ny sary hosodoko" Fandresen'ny Fahafatesana "sy" Juno any ambanin'ny tany ", ary koa ny sary sokitra sasany toy ny" Envy "," Last fitsarana "ary" Pride ".
Karazana fifantohana monstrosities, an'ny "pariahs" Bruegelian. Ireo fotokevitra dia somary malefaka, fa kosa entina am-po maivana.
Ity cataplasm ity dia manondro hazo amin'ny rindrina havia. Ity hazo ity, izay manana "endrika" mihantona eo aminy, dia nalaina avy tamin'ny sary hosodoko "ny tantsaha sy ny mpandroba ny akany", ny tena dikany dia somary miraikitra, izay tiako. "
Ny aingam-panahy: "Faharetana" (sokitra)
Mpanakanto: Hell'O (BE) Toerana: Rue Notre Seigneur n ° 29-31
“Ny Faharetan'i Bruegel dia fanoharana momba ny faharetana (namboarina tamin'ny hevitra tsy azo ovaina), ary ny tanjonay dia ny hiasa amin'ny fanoharana mifanohitra, hakana endrika avy amin'ilay sangan'asa tany am-boalohany izay noheverinay fa mahaliana ary mamadika azy ireo ho endrika geometrika tsotra izay mifandanja. ary tena maro loko. "
Ny aingam-panahy: "Ny fianjeran'ny anjely mpikomy" (sary hosodoko)
Mpanakanto: Fred Lebbe - Farm Prod (BE) Toerana: Rue Rolebeek X Bvd de l'Empereur 36-40
“Nifidy ny filaharana avy amin'ity asa ity aho izay niresaka tamiko ny tontolon'ny sary. Ny fanambiko dia ny handika azy io araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny teknika maoderina momba ny hosodoko aerosol. Fomba iray fanomezam-boninahitra ny haitao teknikan'i Bruegel. ”
Ny hosodoko Phlegm dia ampahany amin'ny fampirantiana The World of Bruegel in Black and White
Mpanakanto: Phlegm (UK) Toerana: Royal Library of Belzika
Ny phlegm dia tsy mamorona fresco rindrina lehibe fotsiny, fa koa manao sokitra varahina kely feno antsipirihany, izay sorany ao amin'ny studio-ny. Mpanakanto iray izay mampikatso an'i Bruegel tamin'ny taonjato faha-21. Azonao atao ny mahita azy eo amin'ny facade sy anatiny amin'ny rindrin'ny Library.
Mural aingam-panahy avy amin'ny sanganasan'i Bruegel maromaro
Mpanakanto: Farm Prod (BE) Toerana: Palais du Coudenberg
Ao anatin'ny fampirantiana Bernardi Bruxellensi Pictori, nahazo vahana ny tranokala arkeolojika ary nampindrana ny tokotaniny ivelany ho an'ireo mpanakanto avy amin'ny faritry ny Farm Prod, izay nandika ny sanganasa hafahafa nataon'i Bruegel matetika tamin'ity fankalazana ny faha-450 taona ity. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrona dia namerina nanamboatra ny iray amin'ireo kilasin'ny tompony. Na namerina ny sangan'asa tamin'ny alalàn'izy ireo manokana azy ireo izy ireo, na namorona firaketana vaovao, natomboka tamin'i Bruegel's. Ireo fandikana ireo dia aseho ao amin'ny Palais du Coudenberg ho toy ny afisy mandravaka ny tokotanin'ny tranombakoka.
Mural aingam-panahy avy amin'ny "Bernard van Orley. Bruxelles sy ny Renaissance "ary" Prints amin'ny vanim-potoana Bruegel "
fampiratiana Artists: Farm Prod (BE)
Nandritra ny iray volana izao dia manana endrika vaovao i la rue Baron Horta, miaraka amina nametrahan'ny mpanao mari-trano Bas Smets, ary rindrina rindrina vaovao hankalazana an'i Pieter Bruegel. Ilay sary an-drindrina, noforonin'i Farm Prod, dia nandika ny hevitry ny taonjato faha-16 tamin'ny findramana sary avy amin'ny fampirantiana roa: “Bernard van Orley. Bruxelles sy ny Renaissance "ary" Prints amin'ny vanim-potoana Bruegel ".
Nanomboka ny taona 2013, ny tanànan'i Bruxelles dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny zavakanto an-tanàn-dehibe ho toy ny vector ho an'ny firaisana ara-tsosialy azon'ny rehetra idirana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny tanàna dia nahamaro ny hetsika tahaka izao: ny antso ho an'ny tetikasa, ny baiko ary ny rindrina ho an'ny fahalalahana maneho hevitra dia tafiditra ao amin'ny PARCOURS Street Art. Misy fresco 150 ankehitriny ao anatin'ity tahiry ity izay manome fampahalalana momba ireo sanganasa toy ny tantaram-piainan'ireo artista an-dalambe. Ity tetikasa hanatsarana ny tanàna ity dia mitombo hatrany ary hanan-karena amin'ny volana ho avy miaraka amina tetikasa vaovao am-polony.
FARM PROD dia fiaraha-miasa iray izay mampivondrona mpanakanto sary maro manodidina ny tetikasa famoronana isan-karazany, natsangana tany Bruxelles tamin'ny taona 2003. Raha samy manana ny fiaviany kanto avokoa izy ireo, ny mpikambana tsirairay kosa dia namolavola ny fahaizany manokana. Androany ny ekipa dia manambatra mpanao hosodoko, graffiti ary mpanakanto sary, mpamorona tranonkala, mpanao sary ary mpanao horonan-tsary. Nandritra ny 15 taona dia nampiasa ny heriny samihafa izy ireo handaminana sy handray anjara amin'ny hetsika ara-tsosialy, na any Belzika na any ivelany.